Kutheni ipeyinti ye-KAWS yeSpongeBob Ithengiswa nje nge-6 yezigidi zeedola - Ubugcisa
Eyona Ubugcisa Kutheni le nto ukupeyinta kweSpongeBob SquarePants kuthengiswa nje nge- $ 6 Million
Kutheni le nto ukupeyinta kweSpongeBob SquarePants kuthengiswa nje nge- $ 6 Million
I-China Chow, uJerry Saltz kunye ne-KAWS ngo-2011.UHeidi Gutman / NBC / NBCU Photo Bank ngokusebenzisa imifanekiso kaGetty
Xa uzama ukuqikelela imarike yobugcisa njengoko isebenza ngoku, kunokuba luncedo ukuba nomfanekiso wale nkundla eyodwa engqondweni yakho njengendawo ye-post-Koons. UKoons, elinye lamagcisa aphumeleleyo kwiplanethi, ukwamazile ngentliziyo yakhe yonke ukuvelisa izinto zodidi lwabathengi abanokuzithenga, oko kuthetha ukuba abangena ezihlangwini zakhe banikwe imvume yokuzilolonga kwimimandla yombono wee-cheeky kunye ne-bombast engenazintloni.
Kule veki nje, uKoons ngokwakhe ubesematheni kwakhona xa igalari kaMnuchin ihlawule i-91.1 yezigidi zeedola kwifandesi kaChristie kwenye ye-1986 Umvundla imifanekiso eqingqiweyo, kodwa oyena mlingisi uxelela uKoons wangoku nje nguBrian Donnelly, owaziwa njengo-KAWS; Umzobo weSpongeBob SquarePants ngumzobi wegrafiti wajika idling blue chip elandiweyo $ 6 yezigidi kwifandesi ngoLwesine .
Uninzi lweeKaw kunye neebhithi ezinzima kwi-20 yeXesha elizayo kunye nentengiso yangoku kwiintsuku ezizayo. Ayinakukwazi ukujija zonke kwimifanekiso eli-10. • #phillips #phillipsauction #auction #auctionhouse #contemporaryart
Iposi ekwabelwana ngalo ngu UAlan Zeng (@choo___) ngoMeyi 14, 2019 kwi-6: 37 pm PDT
Umzobo ubonakalisa iSpongeBob kwimeko yoxinzelelo, ejikelezwe ziimpinda zeengalo zakhe eziphakanyiswe emoyeni ngoqhankqalazo. Amehlo omlinganiswa awelelwe ngaphandle iisimboli ezimbini zeempawu ze-KAWS X. Kodwa abo bazinikele ngokwenene kwi-SquarePants baya kuqaphela ukuba umzobi khange aphindaphinde ngokulula a nangoku ukuba waqhawula kumdlalo wekhathuni wabantwana: UDonnelly ubomvurha ingaphakathi lomlomo wesiponji, kananjalo wacima umnqwazi weKrusty Krab obopha umlinganiswa kwindawo yakhe yengqesho.
Emehlweni e-KAWS, i-SpongeBob SquarePants iguquka isuka kumpheki oqhotsiweyo ukuya kumqondiso wokuphelelwa lithemba okukhoyo. Nokuba olu tshintsho lubalwa njengobugcisa obulungileyo yintsimi evuthiweyo yengxoxo eyandisiweyo, kodwa yintoni yenza umnxeba yinkqubo yexesha elide apho iSpongeBob iye yaba yinto engapheliyo.
spongebob yeyona nto ikufutshane noluntu lwanamhlanje kwimisongo yolwandle efileyo
-Gabby Noone (@twelveoclocke) Ngomhla wamashumi amabini anesithandathu ku-Matshi 2018
Ukuthandwa kwe-KAWS kuye kwanda ngamandla iminyaka emininzi ngoku; amaxabiso aphezulu awuyalelayo ngoku umsebenzi wakhe awenzekanga nje ngobusuku obunye. Oku ngokuyinxenye kungenxa yokuba, njengoninzi lwezona zinto zenziweyo zoyilo, i-KAWS ibeka isitampu sakhe esizimeleyo kwiiprojekthi ezininzi ezahlukeneyo zokuyila. Ngokuqinisekileyo nguye kuphela umculi osebenza kunye noDior kunye neCookie Monster, uTed Loos ubhale kule veki INew York Times . Ingqokelela yakhe ye-KAWS x Sesame Street yaqala e-Uniqlo ekwindla.
Amagcisa athatha indlela enesisa ekusebenzisaneni nebrand ngokuqinisekileyo uziva ngathi yinto ebonakalayo kwilizwe lobugcisa okwangoku, kodwa kunokuba kunomdla ngakumbi ekuqwalaseleni okulandelayo. Ndicinga ukuba ngelixesha singene kakuhle kule nkulungwane, izinto ezenzekayo ngoku ziya kubonakala ngathi ziyinxalenye yekhulu lama-20, hayi eye-21, umlawuli weGalari yase-Acquavella uMichael Findlay uxelele uMbonisi kule veki. Kukho malunga nokuba luhlobo olubonakalayo, ukukhathazeka kwengqondo okanye uguquko olusisuse eCubism saya ePicasso. Kwaye iya kwenza ukuba izinto ezininzi zenziwe ngoku zibonakale ngathi zezakudala. Nangona abantu behlawula imali eninzi kubo, banokuba bahle kakhulu, banokwenziwa kakuhle, banokuba nobukrelekrele, banokuba nobukrelekrele, nokuba kunjani — kodwa baya kuphelelwa lixesha.
Ukufana kweSpongeBob kuthengisa i-6 yezigidi zeedola kuvakalelwa ngokungathi yinto engathandekiyo, kodwa i-avant-garde anomaly nangona kunjalo. Kuyafaneleka ukuba uqaphele, nangona kunjalo, ukuba umlingisi ujikeleza ikona ukuya kwiminyaka yobudala yokusela: wajika i-20 nje kule nyanga, ngoMeyi 1. Kwanele ukuba uthi, iSpongeBob ngokuqinisekileyo indala ngokwaneleyo ukuba ingazixabisa.
OutKast, Jay-Z: Ngubani utata wakho?
Iphuli yeOfisi kaMadness ka-Matshi kaWarren Buffett iyakwenza iDrool
I-pink floyd eludongeni donald ixilongo
san diego comic con 2018 umhla
ufuna iqabane lokuzivocavoca
susa iintlawulo kwingxelo yetyala
uhlalutyo lwesicwangciso-qhinga sentengiso yokutya
Kutheni wonke umntu eyithiyile i-nickelback